Ogige Olga - WRSP
UMU AKA MGBE ỌG OLG OL OLGA
1891 (February 24): A mụrụ Olga Park Mary Olga Bracewell na Gargrave (North Yorkshire), England.
1910: Park na ezinụlọ ya kwagara British Columbia, Canada.
1914: Park malitere ịnata ahụmịhe mmụọ na mmụọ nke Cosmic Christ na ndị ọzọ site na ndụ gafere ọnwụ ma ọ bụ "ala nke eluigwe."
1917 (March 24): Olga Bracewell lụrụ James Fleming Park, onye ọfịko Vancouver nke sitere na Glasgow, Scotland, na St Luke's Anglican Church, South Vancouver, British Columbia.
1919: Park mụrụ nwa ya nwoke bụ Robert Bruce Park.
1922 (June 4): Park mụrụ James Samuel Park onye nwụrụ ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị. Olga nwere ahụmịhe ahụ n'oge a mụrụ Jamie.
1923–1940: Olga ghọrọ onye na-arụsi ọrụ ike na St Mary's Anglican Church na Vancouver na 1920s, mana ọ gara n'ihu na-enwe ọhụụ ma na-eduzi ahụmịhe omimi, nke ọ na-edebekarị onwe ya. O ji nlezianya dekọọ nkọwa nke ahụmịhe nke ime ya, ma mechaa mepee ekpere kwa ụtụtụ na nke mgbede.
1941–1963: N’etiti 1940s, Park natara okwu na egwu maka ọrụ udo dị omimi nke ọ na-eme n’oge ndụ ya niile na nzuzo nke ụlọ ya. O sooro ndi Psychical Research Society no na England, buru onye nnochite anya Canada nke ndi otu ndi uka maka nyocha akwukwo.
1956–1963 (Churches ’Fellowship for Psychical and Spiritual Studies nd), bụrụkwa onye otu Spiritual Frontiers Fellowship (Evanston, Illinois) n’otu oge ahụ.
1960: E bipụtara ogige N'agbata Oge na Ebighị Ebi (Vantage Press).
1964: Park kwagara n'otu obere ụlọ na Port Moody, British Columbia ebe o tinyere ndụ ya niile ka ọ dịrị ndụ dị ka onye na-atụgharị uche, na omume a na-eme kwa ụbọchị nke mmekọrịta udo nke onye nkuzi ya nyere ya site na ndụ karịrị ọnwụ. .
1968: E bipụtara onwe gị Mmadu, Ulo Chukwu .
1969: Park bipụtara onwe ya Akwụkwọ ndụmọdụ na abụ .
1974: Park bipụtara onwe ya Ọnụ Openzọ Na-emeghe .
1978: Mgbe ọ gbajiri nkwonkwo ụkwụ ya, Park si n'ụlọ ahụ soro enyi ya biri na Vancouver. Ọ nọgidere na-enweta nleta site n'aka ndị na-achọ na ndị na-amụ ihe, na-ekerịta amamihe ya na omume ntụgharị uche ya na ndị ọzọ.
1983: Park gbanwere ebe nlekọta maka ndị agadi na Vancouver ebe ọ na-anabata ndị ọbịa oge niile.
1985: Park nwụrụ na Disemba n'ihi nká na nsogbu nke ọnọdụ afọ na-amaghị. N’agbanyeghi oke ihe mgbu na ngwụcha nke ndụ ya, ọ nwụrụ n’udo n’ihu enyi ya.
Mary Olga Park (onye họọrọ ịga Olga) mụrụ na February 24, 1891 na Gargrave, North Yorkshire, England. Nne ya, Ellen Bracewell, bụ onye nlekọta maka ndị isi obodo na nna ya, Bruce Bracewell, bụ onye ahịa na onye ndozi ime ụlọ maka nnukwu ụlọ na England. Ndị nna nna ya bụ ndị na-akpa ákwà. Olga nwere mmasị n'ịgụ akwụkwọ, gosipụtara ikike izizi na egwu, ma nwee olu soprano doro anya ma dị ọcha. Ọ gara ụlọ akwụkwọ dị iche iche na ala ịta ahịhịa nke Birmingham ruo afọ iri na anọ mgbe ọ meriri agụmakwụkwọ na Aston Pupil Teachers 'Center ruo afọ atọ, na-ezube ịbụ onye nkuzi.
Dika nwatakiri, Park gara nzukọ ekpere rue mgbe arụmụka Darwin gbasara nkewa ụka Wesleyan nke Methodist. Membersfọdụ ndị otu hapụrụ n'ihi na ha chọtara nkọwa nkịtị nke mmalite mmadụ na akwụkwọ Jenesis adabaghị na nchọpụta ọhụụ nke sayensị ala. 'Smụ nwanne nne Olga bụ ndị Anglịkan dị elu, n'agbanyeghị agbanyeghị nnabata ndị nne na nna, ya na ụmụ nwanne nne ya zoro na St Thomas Anglican Church dị nso, nke egwu, liturgy na sacramentalism dọtara.
Afei, wɔ 1910 mu no, Olga ne n'abusua nyinaa traa Canada. Nna ya kpebiri ịhapụ ihe niile ọ wuru na England na-enwe olileanya imeziwanye atụmanya ya. Ahụmịhe ime mmụọ na-enweghị atụ nke Park kọwara n'akwụkwọ ya ndị edepụtara onwe ya, N'agbata Oge na Ebighị Ebi (1960) na Ọnụ Openzọ Na-emeghe (1972), bidoro mgbe afọ ole na ole gachara n’ihe dị ka n’afọ 1914.
Ntughari na Vancouver siri ike, ebe a manyere Olga ịhapụ ọrụ ịgba egwu na England ebe ọ nwere njikọ mmekọrịta na ohere agụmakwụkwọ. Ọ kọwara Vancouver nke oge mbụ dị ka ebe ọnọdụ ndị ọsụ ụzọ na-enweghị obere ọdịnala ọdịnala.
Na 1917, Olga lụrụ James Fleming Park, onye ọchụnta ego Vancouver nke mbụ si Glasgow, Scotland. Ha biri na obibi dị iche iche na Vancouver. N'ime oge a niile, ọ kụziri ụlọ akwụkwọ Sọnde na ụka Anglịkan, na-emepe usoro mmụta agụmakwụkwọ ọhụrụ maka ndị ntorobịa. N’ebe ahụ, ọ ghọrọ onye ụkọchukwu dị ka enyi n’oge ahụ, nwoke nke ji mmụọ kpọrọ ihe nghọta, Charles Sydney McGaffin, onye mgbe ọ nwụsịrị ghọrọ onye mmekọ ime mmụọ ya na ya na-arụ ọrụ site na ndụ gafere ọnwụ.
Na Vancouver n'oge ngwụcha 1950s na mbido 1960s Olga Park gosipụtara echiche na omume Theosophical na Spiritualist. N'oge na-adịghị anya, ọ gara nzukọ ime mmụọ ma nakweere ụfọdụ okwu ha, mana ọ chọghị ịkọwa onwe ya dị ka Theosophist ma ọ bụ Spiritualist. Ọ hụrụ onwe ya dịka onye omimi nke ndị Kraịst na ụzọ ịtụgharị uche.
Mgbe ọ na-etolite etolite, ọ malitere ịmụ ihe omimi nke Akwụkwọ Nsọ ọhụụ iji ghọta ihe akụkọ ihe mere eme nke Jizọs nwere ike ikwu ma kụzie na nkọwa nke ụka Ndị Kraịst na-emepe emepe na narị afọ ndị mbụ etinyere ndụ ya na nkuzi ya. N'ọtụtụ ụzọ, ọ tụrụ anya inweta agụmakwụkwọ nke ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Jizọs dịka John Dominic Crossan, Marcus Borg na ndị ọzọ. Ka oge na-aga, ọ hapụrụ ụlọ ụka ahụ maka na ọ na-eche ọtụtụ n'ime ihe ọ kpọrọ "Churchianity" nke oge ya ekwekọghị na ndụ na nkuzi nke Jizọs o jere ozi dabere na mmata ọhụụ ya.
Na 1964, mgbe di ya nwụsịrị na 1959, Park si n'ụlọ nwa ya pụọ ​​n'otu ụlọ ime ụlọ dị na Port Moody na Burrard Inlet ọwụwa anyanwụ nke Vancouver iji tụgharịa uche na ya. N’oge a rue n’ọgwụgwụ nke ndụ ya, ahụmịhe omimi ya na ọhụụ ya ka sie ike. Mgbe a kpọpụsịrị ya n'ụlọ nta ahụ, ndị nwere mmasị na ndị na-achọ ọdịmma na afọ ndụ dị iche iche bụ ndị nụrụ banyere ya n'ọnụ ma ọ bụ were akwụkwọ ya malitere ịbịa. Becamefọdụ ghọrọ “ndị na-amụ ihe” ya wee nata nkuzi banyere omume naanị ịnata oriri nsọ ọ natara yana nghọta dị omimi nke ọ dabere.
Olga nwere ọtụtụ ọhụụ pụrụ iche n'oge ndụ ya niile, yana ọtụtụ ụdị ọhụụ dị omimi. Dị ka ọ agụghachiri N'agbata Oge na Ebighị Ebi, ndị a abịabeghị kpamkpam, na mbụ enweghị obi iru ala na ha. Ọ bụ naanị na mgbe afọ ya gachara ka ọ gwara ha ndị enyi ya, ma chịkọta ihe ndekọ ime mmụọ ya maka ikesaara ndị maara ya gosipụtara mmasị. Ka ọ na-erule n'oge a, ahụmahụ ndị dị otú a buru ibu nke na ọ nakweere ọdịiche ha, ma nwee olileanya na ha ga-enyere ndị ọzọ aka.
Otu eriri dị mkpa n'ime ọhụụ Olga Park niile bụ na ha metụtara nzube nke ndụ n'ụwa na echiche ya banyere ọrụ Cosmic Kraịst na-aga n'ihu na mgbanwe ime mmụọ nke mmadụ. Ọ bụ ezie na a nabatara ahụmahụ ya n'ime ọnọdụ Ndị Kraịst, ha kwuru okwu banyere ụkpụrụ ime mmụọ nke gafere ókèala okpukpe na echiche. Na 1972 Park tụgharịrị uche na ndụ ime mmụọ ya bara ụba wee kọọ ụfọdụ isiokwu metụtara n'etiti ahụmịhe omimi ndị a n'akwụkwọ ya. Ọnụ Openzọ Na-emeghe .
Olga nọgidere na-ebi naanị n'ụlọ ahụ ruo 1978, mgbe ọ dị afọ 87 ọ kwagara Vancouver n'ihi ahụike na-esighi ike mgbe ọ gbasara nkwonkwo ụkwụ. Do ke ​​enye okodụn̄ ke ufọk ubet ufan esie tutu esịm Jenụwarị 1983 ke ini enye ọkọwọrọde aka ebiet emi ẹsisede ẹban̄a n̄kani owo ke Vancouver. Olga nwụrụ na Disemba 1985 mgbe ọ dị afọ iri iteghete na anọ. Nwa ya nwoke, Robert, nwụrụ afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị. Grandmụ ụmụ ya abụọ, Jim na Valerie Park, na nwa nwa nwa ya anwụghị.
Dika ihe omimi nke ulo oru ulo uka na ndi okpukpe, Olga siri ọnwụ na ya achoghi iru “otu,” obughi nke gunyere ihe ndi kwesiri, ndi otu, ndi isi, ma obu ozizi. O kwusiri ike mkpa ọ dị inwe ahụmịhe dị n'ime ime karịa otu nkwenkwe. Park mere ka o doo anya na ya ebughi n'uche ịchọta ụka ma ọ bụ usoro okpukpe.
Kemgbe ndụ ya, Olga apụtaghị ahụmịhe ahụ ya, ọhụụ ọhụụ, precognition, "anya nke atọ" na nkwukọrịta kwa ụbọchị na ndụ karịrị ọnwụ. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike itinye olu nke enyi ma ọ bụ kọntaktị ya n'ime ụwa ndị mmụọ. O tinyere ihe omuma ndia n'ime ndu ya n'uzo kwagidere echiche na mmetuta ma gosiputa mkpa odi. Ọ kuziri na uto nke amamihe na ịhụnanya nke Chineke bụ ebumnobi kasịnụ nke steeti ndị dị otu a, ọ bụghị steeti ndị ahụ n'onwe ha.
Park na-ekerịta ọhụụ ya na nghọta ya yana omume ime mmụọ doro anya nye onye ọ bụla jụrụ ajụjụ. O kwenyeghi na ntọghata, ma mesie ike mkpa ọ dị ịza ezigbo ndị na-ajụ ajụjụ. Ọ kụziri na ịtọlite ​​oge na ebe maka ekpere na ntụgharị uche ga-agbasawanye nghọta ma mee ka ndị na-achọ inweta ìhè na nduzi nke aka ha.
Kemgbe ndụ ya, Olga nwere ma ọ dịkarịa ala otu narị ụmụ akwụkwọ nke afọ dị iche iche, ọnụ ọgụgụ mmadụ, na okpukpe dị iche iche bụ ndị ọnụ na-adọta ya. Ọtụtụ oge, ọ zutere ndị ọ na-amụrụ ihe n'otu n'otu n'ụlọ ya dị na Port Moody, British Columbia, mana oge ọ bụla ọ na - eme ihe dị ka mmadụ abụọ ma ọ bụ anọ n'otu oge. Fọdụ bụ ndị agbata obi ma ọ bụ ndị enyi ndị agbata obi. Ihe dị ka pasent iri bụ ụmụ nwanyị na-etolite etolite, na-esokwa ndị di ha mgbe ụfọdụ. Ọtụtụ ụmụ nwoke ndị torola eto chọkwara ya. otu onye Dutch kwabatara Canada na onye na-ese foto. Ọtụtụ ndị nkụzi si na kọleji na mahadum dị na mpaghara nke Ọmụmụ Okpukpe, Akwụkwọ Bekee, na Nkà Ihe Ọmụma gara leta Park nke nụrụ banyere ya site n'aka ụmụ akwụkwọ ha ma ọ bụ ndị ọrụ ibe ha. Imirikiti ụmụ akwụkwọ ya bụ ndị klaasị na-arụ ọrụ na klaasị na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ọ dịkarịa ala, pasent iri abụọ nke ndị nwere mmasị na Olga Park bụ ndị ntorobịa. Onye mbụ na-amụ ihe, nwa okorobịa si England nke chọrọ ya mgbe ọ tụtụchara otu akwụkwọ ọ bipụtara onwe ya na ụlọ ahịa esoteric na Vancouver, mechara laghachi England ka ọ bụrụ ọkachamara na ire ọgwụ nri. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mahadum nwere mmasị na mmụọ ma ọ bụ okpukpe chọrọ ya. Ná mmalite afọ ndị 1970, ọtụtụ ndị na-amụ ya bụ hipp, nke so na ndị megidere omenala na West Coast nke North America. Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị na-eto eto a ghọrọ ndị na-ese ihe: n'etiti ha bụ onye na-ede uri, ọkpụite, onye edemede nke ime mmụọ, na onye na-asụ ugegbe. Otu n'ime ụmụ nwa nwa ya, bụ onye gara mkpa Park mgbe ọ gbajiri nkwonkwo ụkwụ, mechara bụrụ ọkachamara nọọsụ. Park na ụmụ agbọghọ abụọ nọ n'afọ iri na ụma na-eleta oge ụfọdụ na mbido 1970. Otu nwa okorobịa ọkpụite na onye na-ese ihe a na-ahụ anya nke ya na ndị mkpọrọ nọ n'otu ụlọ mkpọrọ dị n'ógbè ahụ kpọtụrụ ya na otu onye mkpọrọ na-ajụ ajụjụ, onye ya na ya dere oge.
Ihe kariri ọkara nke ụmụ akwụkwọ Olga bụ ndị Kristian ma ọ bụ nwee nzụlite Ndị Kraịst, mana ọtụtụ ndị enweghị mmasị n'okpukpe ọdịnala n'ihi na ọ na-elekwasị anya na nkwenkwe na nkwenkwe. Ndị a na-achọ omume ime mmụọ nke mere ka ha nwee ike ịchọta njikọ dị n'etiti ọdịnala na-atụgharị uche nke Iso Christianityzọ Kraịst na nke ọdịnala ime mmụọ ndị ọzọ, ọkachasị nke Asia dị ka Buddha na okpukpe Hindu. Ogige ahụ ghere oghe nye ndị kpọrọ onwe ha ndị na-ekweghị na Chineke ma ọ bụ ndị na-ekweghị na Chineke ma ọ bụ ndị sitere n'okpukpe ndị ọzọ.
Nzukọ na Park dị ka ihe na-ezighi ezi, na-amalite site na mkparịta ụka na tii. Kaosinadị, n'oge na-adịghị anya ọ ga-amalite ịkọkọrịta ahụmịhe na ọhụụ ya, na-eme ka a ghọta ihe ha pụtara na ebum n'uche ha. Mgbe ahụ ọ ga-enweta ajụjụ, mkparịta ụka ga-esokwa. Mgbe ọtụtụ nleta gasịrị, a na-akpọkarị ụmụ akwụkwọ ka ha sonye na oriri udo kwa izu na-eri ebe ịchụàjà ya n'ebe a na-aakingụ mmanya na-aba n'anya. N'ebe ahụ ọ ga-akọwara akara na ihe emume udo ahụ na-akụzi abụ na ekpere ndị dugara ma pụta n'ihe ọ kpọrọ "Ntị Dị Nsọ" ("Ọrụ Oriri Nsọ" nd). Ọ bụrụ na ha họrọ, ụmụ akwụkwọ ga-aga n'ihu na-eme emume udo ahụ na nzuzo n'ụlọ ha. Okwu, abụ na ntuziaka maka ọrụ udo ya dị na webụsaịtị ya (Olga Park: Twentieth-Century Mystic nd).
Olga raara onwe ya nye onye gosiputara ya na nwata ya dika Cosmic Christ, ma wezuga onwe ya nye uzo nke o guzobere n'elu uwa n'oge Jisos nke Nazaret. Ọ hụrụ Jizọs nke ọhụụ ya ka ọ na-arụsi ọrụ ike na-ekwu banyere nsogbu ụwa anyị na-apụta. O kwenyeghị n'ozizi ahụ bụ́ na ọ dị onye ọ bụla mkpa ịnakwere Jizọs Kraịst iji bụrụ onye a “zọpụtara.” Kama nke ahụ, ọ hụrụ Cosmic Christ dị ka mmadụ nke nwetara ụkpụrụ nke mmụọ n'oge ndụ ya, onye ndụ ya na nkuzi ya kwekọrọ na ụkpụrụ na nkuzi nke ndị isi ndị ọzọ na ndị guzobere okpukpe ụwa. Ọ nwetawo ọnọdụ nke Cosmic Christ ma ọ bụghị Chineke bụ mmadụ. Jizọs a bụụrụ ya onye na-ede uri na onye nkụzi amamihe, dị ka ihe ngosi na okwu ọnụ ya na-egosi, na onye ọkà mmụta sayensị n'echiche kacha ochie nke okwu "sayensị" dị ka ihe jikọrọ maara.
Ọ kụziri na sayensị ọdịda anyanwụ nke ụwa na echiche na-eche nche emechila ọtụtụ ndị ka ha ghara ịgụnye ihe, na-enweghị nghọta. Kraist bu onye nkuzi ya kariri, n'ihi na o nwetawo ike nke ndu site n'ọtụtụ ndu. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ tụgharịrị uche na amamihe nke okpukperechi ụwa Ọwụwa Anyanwụ na Ọdịda Anyanwụ na nkọwa ya banyere ọhụụ ya na Akwụkwọ Nsọ Hibru na nke Ndị Kraịst, na-ahụ njikọ dị n'etiti ọdịnala amamihe dị iche iche. O sitere na nketa nke ndi Kristain ya ma na-enwe kwa mmuo kwa ubochi. N'oge ndụ ya, Olga na-ekwu okwu site na ndụ karịrị ọnwụ na ọhụụ ọhụụ
ugboro ugboro, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa izu. A kọwara ụfọdụ n'ime ọhụụ ọhụụ dị mkpa Olga n'okwu nke aka ya na weebụsaịtị nwere ihe odide nke onwe ya: akụkọ banyere ite mmụọ mmụọ na mkpọmkpọ ebe ya; ikiri ihe ngosi nke okpukpere chi nile; ahụmahụ nke Cosmic Christ dị ka Osiris na Pyramid Ukwu nke Giza; njem nlegharị anya nke Nzukọ nke Kraịst nke Ọdịnihu; akụkọ banyere Templelọ Nsọ nke Chineke maara; na nnata ya nke ọhụụ nke atọ ("The Communion Service" nd).
Na mbido iri asaa na asaa, ekpughere ya Olga site n'ọtụtụ usoro ọhụụ e nyere ya ka ọ kuziere ndị ọzọ iri achịcha na ị wineụ mmanya na tebụl ekpere ụlọ, nke ọ tụrụ aro na ọ nwere ike ịdị na niche ma ọ bụ n'akụkụ akụkụ mmadụ. ime ụlọ. Ebumnuche nke omume a, maka onwe ya na ndị na-amụ ya, bụ iji mee ka uto ime mmụọ gaa ntozu okè (njikọta ime mmụọ) na ịme ka nguzozi dị n'etiti ntụgharị uche na ime ihe na ndụ mmadụ kwa ụbọchị. A kpọrọ ụmụ akwụkwọ ya ka ha soro ya site na ịtọ tebụl nke aka ha ma ọ bụ ebe ha raara onwe ha nye dị ka ihe dị mma ma na-etinye onwe ha oge ekpere, ntụgharị uche, na udo. Mgbe ha gara ileta Olga ọzọ, ha ga-atụle nghọta na mgbanwe dị na ndụ ha sitere na omume ha.
Olga kụziri mkpa ọ dị iguzobe ebe pụrụ iche na oge ewepụtara maka ekpere na ntụgharị uche. O kwusiri ike na ike mmụọ na mmụọ nke mmadụ nwere ike ịmebi ngwa ngwa site na mbata na mbata nke ndụ kwa ụbọchị, yana na ọ dị mkpa iji wuo ụlọ nsọ ma ọ bụ ebe dị nsọ n'ime mkpụrụ obi nke dị na Creative Spirit. Ọ hụrụ okpokoro ekpere ya dịka okpokoro iri nri maka udo karịa ebe ịchụàjà ma ọ bụ ebe ịchụ aja, dị ka ebe dị nsọ ebe ndị na-eri ya na-enweta ọgwụgwọ, nkasi obi, na nduzi, na-enyefe ikike dị elu kwa ụbọchị, ma na-ekpe ekpere maka ndị ọzọ .
Na mgbakwunye na omume ya nke ekpere ụtụtụ na nke mgbede, Olga mepụtara ọrụ udo nke o kwuru na Onye Ozizi ya na onye ndu ya nyere ya na ndụ ọzọ nke ya na onye edemede (ma ọ bụ isi mmalite) metụtara maka akụkọ ndị dị na Oziọma Jọn. . Ọ kụziiri ụmụ akwụkwọ ya ọ bụla rịọrọ ka ọ sonyere ya n'ụlọ akwụkwọ ahụ na-enweghị ihe karịrị mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ. Ọtụtụ n’ime ha mechara kpebie ịna-eme ya n’ụlọ ha. Ruo oge ụfọdụ, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-eso nwa akwụkwọ ibe ha emekọkọ ihe n’ụlọ, ma imirikiti n’ime ha na-anọrọ onwe ha. Ha abughi otu ndi ozo guzobere na Park n'oge ndu ya ma obu mgbe o nwuru, ma ufodu zutere iji kwurita echiche ya, omume ya, na uzo ya na akwukwo nso.
Olga jụrụ nkwenkwe bụ́ na ogbugbu Jisọs nke ndị Rom bụ àjà Chineke chọrọ n'aka “otu Ọkpara Ọ mụrụ” iji gbaghara ihe a kpọrọ mmadụ maka mmehie ha. N’ime emume Olga, achịcha na-anọchi anya “Okwu nke ndụ e si n’eluigwe kpughee,” na mmanya ahụ “ịhụnanya nke Kraịst na mkpakọrịta nke eluigwe.” Ọrụ ahụ gụnyere njikọta nke ukwe na akwụkwọ nsọ nke dugara ma pụọ ​​na nkwụsị nkịtị. Ebumnuche nke ọrụ ahụ bụ iji rụọ ọrụ ọkwa dị elu n'ime onye ọ bụla so na ya. Ọ kuziri na Mgbapu dị Nsọ a dị n'etiti etiti mmadụ niile, ma bụrụkwa isi mmalite nke ndụ niile ebe anyị jikọtara ọnụ na otu.
Ihe ọzọ bụ na ọ kụziri na ihe mere ha ji kwụsị ịgbachi nkịtị bụ ka ha wee “nụ olu” ahụ. Ntị a dị n'ime abụghị ụda na ntị site na olu a hụrụ dị ka ihe na-abụghị nke onwe, kama ọ bụ ntoputa nke amamihe-maara site n'ime isi mmadụ ọ bụla. Ọ kụziiri mmadụ nwere ike ịnata nduzi site na isi nke onwe ya nke bụ isi ma ọ bụ etiti zoro ezo nke cosmos. Ozizi ya dabere n'echiche bụ na microcosm ma ọ bụ obere usoro ihe dị iche iche bụ otu na usoro nke mbara igwe ma ọ bụ usoro ka ukwuu nke ihe. Ya mere, nụ olu ahụ abụghị maka nduzi nke mpụga nke Chineke nyere na mpụga ụwa ma ọ bụ onye ọ bụla n'onwe ya, kama ọ bụ Ọnụnọ nke bi na onye ọ bụla ma dịrị ndụ n'ime ihe niile.
Dị ka onye ndu ime mmụọ, Olga gbara ụmụ akwụkwọ ya ume ka ha tụkwasị obi na nduzi nke ha. Otu n'ime okwu ya mgbe niile bụ, "Ejila okwu m maka ya. Nwalee ya n’onwe gị iji mara ma ọ na-arụ ọrụ. ”
Ọ gbara ntozu oke nke onye ọ bụla n’ime ndị na-amụ ya. Ma ndị nọ ya nso kwenyere na ọ na-ekwu eziokwu na ịdị ike na ogo nke ọhụụ ya nke mere na o doro anya na ọ bi n'ọtụtụ akụkụ n'otu oge, jiri amara gwa ha okwu. Ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ ya chọpụtara na mgbe ha rutere n'ụlọ nta ahụ, Park na-amalitekarị iji nghọta na-ekwu okwu banyere otu esemokwu ma ọ bụ ajụjụ ha na-agba mgba; n'agbanyeghị nke ahụ, o kwusiri ike na ọ gụghị ihe mmadụ chere kama ọ bụ 'nghọta si n'ime ya' ka ọ mara ihe onye ọ bụla na-eme.
Ọ na-atụlekarị ihe ọ kpọrọ mmụọ "at-one-ment" ma ọ bụ "nkwenye" ​​na njikọ nke otu bandwidụ akọwapụtara dị ka redio. Ọ kụzikwara na "ihe niile bụ site na mgbasa ozi," ma hụ onwe ya dị ka onye nwere ikike iji mee ka otu akụkụ na nke ọzọ. N'oge ufodu ihe omumu ya ka onye ndu ya kuru ya na ndu ozo (onu ogugu o kuru onye nkuzi ya) iji nyere ndi ozo aka site na ndu nke uwa rue ndu karia onwu.
Nzukọ Olga na-aga n'ihu na ndị mmadụ na ndị nkuzi site na ndụ karịrị ọnwụ kwenyesiri ike na mmụọ na-adị ndụ ọnwụ. Otutu n'ime nkuzi ya lekwasiri anya ka esi teta ma mepee ihe o kporo "ihe omuma ato ato," nguzozi nke aru, nkpuru obi (tinyere uche na mmetụta uche), na mmụọ. Studentsmụ akwụkwọ ya na-ekwukarị na naanị mkpakọrịta mụ na Olga na-akpali ha ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ ihe omimi.
Ihe ịma aka kasịnụ nke Olga Park, ọkpụkpọ oku ya na ndụ ịnọ naanị ya, na-eche echiche, metụtara ụfọdụ owu ọmụma n'afọ ndị mbụ. N'ịbụ onye na-enweghị mmasị na onye na-ahụ ihe onwunwe, na-eche echiche n'echiche nke oge ya (echiche nke na ihe anyị nwere ike ịhụ ma tụọ n'ụzọ doro anya bụ eziokwu niile) ọ gara n'ihu na-edebe ihe ndekọ nke ahụmịhe nke ime ya.
Ọ masịrị ya ịrụ ọrụ na obere otu ndị mmadụ dọtara ya na ọchịchọ ya ịpụ n'èzí nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ pụtara na ọ gaghị eduga mmegharị. Agbanyeghị, ndụ zoro ezo ya, yana nkuzi ya banyere mkpa ọ dị n'ikpe ekpere na ito otuto oge niile, nwere nnukwu mmetụta na ndụ ọtụtụ. A na-achịkọta akwụkwọ ya na ihe odide ya ugbu a na ebe nchekwa na Mahadum Manitoba. O mere ihe Jizọs kụziri na onye nkụzi na-agha mkpụrụ, n'amaghị ihe zoro ezo nke omume na mbụ yiri obere.
Mkpebi Olga ịghara ịkwalite onwe ya dị ka onye ndu nke otu ngagharị si na nghọta a tụlere na nghọta na nkuzi nke ndị guzobere ọtụtụ okpukpe na-ebelatala ma ọ bụ na-agbagọ site na ụlọ ọrụ ndị toro gburugburu ha. Ọ rụrụ ụka na mgbe Iso Christianityzọ Kraịst ghọrọ okpukpe okpukpe nke Alaeze Ukwu Rom, nkwenkwe na ozizi nke chọọchị na-ekwutọkarị ndụ na ozizi Jizọs, onye nkụzi ihe omimi nke ndị Juu. O chere na ihe nketa Jizọs agaghị anwụrịrị ma a sị na chọọchị ahụ, kama na ọ ga-abụrịrị na a gafere ya site na ndị otu dị iche iche dị iche iche. Ya mere, ihe nketa ya abughi na ịdabere na njide onwe ya, kama na nkuzi ya banyere uru nke ntụgharị uche na udo, nke a ga-arụ n'ụlọ mmadụ ma ọ bụ ọnọdụ nkịtị site n'aka ndị mmadụ na obere otu. Ozizi ya banyere otu esi emeghe ọnụnọ nke Cosmic Christ na ịbịakwute Kraịst nke a ka egosiri na ọtụtụ ederede ya, ọtụtụ n'ime ha erubeghị ebipụta n'oge a.
Ozizi Olga na-adi nke oma n'ime ihe omimi nke ndi Kristain. Ebe ọ bụ na echiche ya na omume ya daba n'akụkụ nke Iso Christianityzọ Kraịst, a ghọtaghị ya nke ọma n'oge ndụ ya. Agbanyeghị, ọ bụ onye mgbagwoju anya na onye na-eme ihe ike, ebe ọ bụ onye nnọchi anya ndị nnọchi anya Canada maka Canadianka Ọgbakọ maka Ọrịa Uche na Ime Mmụọ mgbe ọ dị afọ iri isii, ma gbalịa imepe mkparịta ụka na ụka ụka Kraịst na Vancouver gbasara ndụ karịrị ọnwụ. . Ọ hụrụ na ụzọ ya yiri nke ndị Quaker na-elekwasị anya na edemede nke ìhè dị n'ime onye ọ bụla kama ịdabere na ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ndị isi mmụọ.
Olga Park biri ma kuzie ihe a nwere ike ịkpọ ugbu a, ime mmụọ, echiche nke na nghọta mmadụ na-agbanwe n'ime nnukwu, na-akwagide mmụọ. O kwuru na ịgbalite karịa ịbụ ndị onwe ha na-achọkarị ọdịmma onwe onye na iche naanị banyere onwe ha n'otu n'otu na n'otu na-amalite ma na-ejedebe na ịdị umeala n'obi, ọchịchọ ijere ihe karịrị ihe anyị chere echiche. Chi Olga ma ọ bụ Mmụọ nke okike abụghị onye ntaramahụhụ ma ọ bụ nna ochie Beingbụ na-achịkwa ụwa site na mpụga ma ọ bụ karịa, kama ọ hụrụ n'anya n'anya, ma nke nwere mmetụta na nke karịrị, nke onwe na nke onye ọzọ, onye na-eji mmejọ anyị na adịghị ike anyị mepụta ọhụụ, eziokwu, na ịma mma. Mmụọ nsọ bụụrụ nke ya “nke anyị na-ebi ma na-ejegharị ma na-adị ka anyị” (Ọrụ 17:28).
Buckwold, Jarad. 2013. Olga Park: Ndepụta Ngwaahịa nke Ihe Ndekọ Ya na Mahadum nke Manitoba Archives & Collections Special. Nweta site na http://umanitoba.ca/libraries/units/archives/collections/complete_holdings/ead/html/Olga-Park_2011.shtml#a14.
Mmekọrịta nke ụka maka Ọmụmụ Ahụike na Mmụọ. nd Nweta site na http://www.churchesfellowship.co.uk/ na 15 December 2015.
Longhurst, Brian. 2012. Buru ụzọ chọọ alaeze ahụ: njem otu mmadụ na Jizọs dị ndụ. Portland: Ọkwa isii na-ebipụta Akwụkwọ.
McCaslin, Susan. 2014. N'ime Mystic: Afọ m na Olga. Toronto: Akwụkwọ Inanna.
Ogige Olga: narị afọ nke iri abụọ Mystic. nd (Weebụsaịtị nke Susan McCaslin kere nwere akwụkwọ Olga Park n'onwe ya bipụtara). Nweta site na http://olgapark.weebly.com/ na 16 June 2017.
Ogige, Olga Mary Bracewell. 1960. N'agbata Oge na Ebighị Ebi. New York: Vantage Press. Nweta site na http://olgapark.weebly.com/uploads/1/0/2/3/102360766/between_time_and_eternity.pdf na 16 June 2017.
Ogige, Olga. 1968. Mmadu, Ulo Chukwu. Nweta site na http://olgapark.weebly.com/uploads/1/0/2/3/102360766/man_the_temple_of_god.pdf na 16 June 2017.
Ogige, Olga. 1969. Akwụkwọ ndụmọdụ na abụ. Nweta site na http://olgapark.weebly.com/uploads/1/0/2/3/102360766/book_of_admonitions_and_poetry.pdf na 16 June 2017.
Ogige, Olga. 1974. Ọnụ Openzọ Na-emeghe. Nweta site na http://olgapark.weebly.com/uploads/1/0/2/3/102360766/an_open_door.pdf na 16 June 2017.
Todd, Douglas. 2015. "A Journey n'ime Parapsychology," September 10. Chọọ. Online blog na Vancouver Sun . Nweta site na http://blogs.vancouversun.com/2015/09/10/a-vancouver-womans-journey-into-parapsychology/ na 18 December 2015.
Mary Olga Park nwere mmasị na ya. Mahadum nke British Columbia Library Rare Books and Collections Special. Dị na http://rbscarchives.library.ubc.ca/index.php/mary-olga-park-fonds.
Mary Olga Park nwere mmasị na ya. Mahadum nke British Columbia Library Rare Books and Collections Special. Nkọwa nchịkọta. Dị na http://rbscarchives.library.ubc.ca/downloads/mary-olga-park-fonds.pdf